कोरोना कहरका बीच अटोमोबाईल क्षेत्रमा दशैं अफर, ४ पांग्रे सवारी किन्नेहरुका लागि कुन कम्पनीका गाडीमा कति छुट ? – bampijhyala.com
‘लालुमै’ गायक सन्दीपले ल्याए ‘सान्बाबु’
Home > समाचार > वित्तिय > कोरोना कहरका बीच अटोमोबाईल क्षेत्रमा दशैं अफर, ४ पांग्रे सवारी किन्नेहरुका लागि कुन कम्पनीका गाडीमा कति छुट ?
कोरोना कहरका बीच अटोमोबाईल क्षेत्रमा दशैं अफर, ४ पांग्रे सवारी किन्नेहरुका लागि कुन कम्पनीका गाडीमा कति छुट ?
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:०२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । विगत ९ महिनायता नेपाललगायत विश्वभरी नै कोरोना भाईरसको कहर कायमै छ । यसको प्रभाव नियन्त्रणका लागि भन्दै लागु गरिएको लकडाउन र निशेधाज्ञाका कारण व्यापार चेन ध्वस्त भएको थियो । सोही अनुसार अब कोरोना केही हदसम्म बानीजस्तै भएपनि दिनप्रतिदिन संक्रमितहरु बढिरहँदा डर भने कायमै छ ।
पछिल्लो समय नेपालीहरुको चाडपर्वको चक्र सुरु भएको छ । यस्तो बेलामा कोरोनाको कहर बढ्दै गएपनि रमाईलो गर्नेहरुले रमालाईलो गर्न नछोड्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । यसैबीच पछिल्लो ७ महिनादेखि बन्द नेपालको अटो व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय खुला गर्ने मौका पाएसँगै दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै अफरको खेलो सुरु गरेका छन् ।
करिव ७ महिना ठप्प भएको यसको व्यापार सरकारले लकडाउन र निशेधाज्ञालाई सहजीकरण गरिदिएसँगै अटो व्यवसायीहरुको अफर सुरु भएको हो । चाडपर्व अफर ल्याएपनि तर व्यापार भने पहिलेको भन्दा खस्केको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
हरेक बर्ष हुने अटो शो पनि यो बर्ष कोरोनाका कारण हुन पाएन । अटो शोमा धेरैभन्दा धेरै गाडी तथा २ पांग्रेको बुकिङ तथा विक्री हुनेगरेको थियो । यसपाली उक्त शो नहुँदा व्यवसायीहरुले ठुलो घाटा वेहोर्नुपरेको छ । तर चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा अटो व्यवसायीहरुले कोरोना कहरमा पनि आफ्नो व्यवसायलाई अगाडी बढाउन दशैं अफरहरु सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना ग्राहकलाई सवारी किन्न आकर्षित गर्नेगरी नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरुले यस्ता अफरहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । जुन निम्नानुसार छन् ।
हुन्डाई दशैं तिहार अफर :
नेपालमा हुन्डाईका लागि अधिकृत विक्रेता लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टलले आफ्ना गाडीहरुप्रति ग्राहकलाई आकर्षित गर्नका लागि ‘हुन्डाई दशैं तिहार अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अफरअन्तरगत ग्राहकले ‘यसपालीको दशैं तिहार वेलकम टु हुन्डाई परिवार’ नामक अफरअन्तरगत गाडी खरिदमा आकर्षक नगद फिर्ता पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार उक्त अफरअन्तर्गत हुन्डाई गाडी खरिदकर्ता ग्राहकले स्क्र्याच कार्डमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्म नगद फिर्ता पाउनेछन् । यस्तै बम्पर उपहार अन्तर्गत २ भाग्यशाली विजेताले भने हुन्डाईको अउरा र आई१० नियोस पाउनेछन् । यस्तै कम्पनीले उक्त अफरअन्तर्गत १ बर्षको बीमा सुविधासमेत पाउनेछन् ।
सुजुकीको पर्वाेत्सव अफर :
नेपालमा सुजुकी ब्राण्डको अधिकृत विक्रेता सिजी मोटोकर्पले नेपालीहरुको महानचाड दशैंतिहारलाई लक्षित गरी पर्वाेत्सव अफर सार्वजनिक गरेको छ । ‘यो दशैं तिहारमा सुजुकीको साथ’ नारासहितको उक्त अफरअन्तर्गत ग्राहकले सुजुकी गाडीको खरिदमा ३ लाख ५० हजारसम्म नगद फिर्ता पाउन सक्नेछन् ।
कम्पनीका अनुसार उक्त अफरअन्तर्गत गाडी खरिद गर्दा ग्राहकले कम्तिमा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी खरिद गर्न पाउनेछन् । जसअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस पनि हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले उक्त अफरअन्तर्गत १ बर्षको बीमा र पार्ट्स सुविधासँगै रिफर एण्ड विन क्यास प्राईजको पनि घोषणा गरेको छ ।
रेनल्ट शुभ दिन ६ अफर :
यस्तै दशैं तिहारलाई लक्षित गरी अफर सार्वजनिक गर्ने अर्काे रेनल्ट कम्पनीले भने ‘शुभ दिन६’ नामक अफर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अफरअन्तर्गत रेनल्ट ब्राण्डको गाडी किन्ने ग्राहकले ५ लाखसम्म नगद फिर्ता पाउन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त अफरमा निशुल्क बीमा, निशुल्क एसेसरिज, लोयल्टी बोनस, एक्सचेन्ज बोनस, ५ बर्षको वारेन्टी र ५ लाखसम्मको नगद फिर्तासहित ६ ओटा सुविधा रहेका छन् ।
फोर्डको फेस्टिभ अफर :
फोर्ड गाडीका खरिदकर्ता ग्राहलाई भन्दै फोर्ड कम्पनीले दशैं तिहार विशेष ‘फोर्ड फेस्टिभ अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो अफरमा ४ लाख ५० हजारसम्म जित्ने मौका, ६ महिनाको ईएमआई छुट तथा भुक्तानी स्थगन गर्ने सुविधा राखेको छ । गाडीका ग्राहकले उक्त ३ अफरमध्ये कुनै एक अफर छान्ने मौका पाउनेछन् । उक्त अफरसँगै ग्राहकले फोर्ड गाडीको खरिदमा सडक दस्तुर छुट, लोयल्टी छुट, ३ बर्षको वारेन्टी, ३ बर्षको निशुल्क सर्भिस, १ बर्षको बीमा निशुल्क लगायतका सुविधाहरु पाउनेछन् ।
टाटाको दशैं अफर :
नेपालमा टाटा ब्राण्डका गाडीहरुको अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडर्सले पनि दशैंका लागि भन्दै अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘यो दशैंमा किन मान्ने बोर ?,टाटा मोटर्सले दिन्छ उपहार मोर’ नामकर अफर सार्वजनिक गरेको हो । उक्त अफरअन्तर्गत टाटा ब्राण्डका गाडीहरुको खरिद गर्ने ग्राहकले मोबाईल फोन देखि वासिङ मेसिनसम्मका उपहार पाउनेछन् ।
कम्पनीका अनुसार उक्त गाडीहरुको खरिदमा ग्राहकहरुले सामसङ ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा, सामसङको ट्याब्लेट, सोनीको ईन्टरनेट टीभी, वासिङ मेसिन र माईक्रोवेभ ओभनसमेत पुरस्कार पाउने बताईएको छ । यस्तै कम्पनीको गाडी खरिदमा सेओर सट प्राईज र लक्की ड्रमार्फत पुरस्कार पनि राखेको छ ।
हाल नेपालमा रहेका होण्डा, महिन्द्रा, भक्सवागन, स्कोडा, जीपलगायतका कम्पनीहरुले भने हालसम्म दशै अफर ल्याईसकेका छैनन् ।
२०२० को अन्तिमसम्म कोरोनाको खोप तयार हुने डब्लुएचओको दाबी, २०२१ को अन्तिमसम्ममा विश्वभर दुई अर्ब डोज खोप वितरण
जोकोभिच फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:३५ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ डलरले घटेको...
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:२७ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । कोरोना महामारीमा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:०७ bampijhyala
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:४७ bampijhyala
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १८:०२ bampijhyala
याम्पमा फेसन डिजाइनरको प्रतिस्पर्धा २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:०२
फवानसफ्ट १८ वर्षमा प्रवेश, एक हजार जनालाई रोजगारी दिएको दाबी २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:०२
‘लालुमै’ गायक सन्दीपले ल्याए ‘सान्बाबु’ २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:०२
लोपोन्मुख तामे सालक घोडाघोडीको गाउँमा भेटियो २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:०२
भीम माध्यमिक विद्यालय पूर्व विद्यार्थीहरुको भेला स्काई जोन धुम्वाराहीमा सम्पन्न सहयोगी विद्यार्थीहरुको लहर बढ्दै २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:०२